२९ वर्षमा विधवा भएकी लिली थापाको निष्कर्ष : श्रीमानको मृत्यु हुँदैमा श्रीमतीको जीवन अन्त्य हुँदैन - Ratopati
काठमाडौंको कालिकास्थानमा जन्मिएकी लिली थापा एकल महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी हुन् । २० वर्षदेखि मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी अध्यक्ष रहेकी उनीसँग एकल महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभव, दुई दशकको एकल महिलाको अवस्थाबारे रातोपाटीकर्मी आस्था केसीले कुराकानी गरेकी छन् ।
मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह नेपाल गठन भएको २० वर्ष भयो । त्यतिबेलाको समाजमा महिला, त्यसमाथि पनि एकल महिलाको अवस्था निकै कमजोर थियो । त्यस्ता महिलाका लागि बोल्ने, त्यस्ता महिला आएर आफ्नो कुरा राख्ने, मन खोलेर रुने, पीडा साटासाट गर्ने ठाउँ थिएन । त्यस्तै ठाउँ खोज्दै जाँदा यो संस्थाको आवश्यकताबोध भयो र संस्था जन्मियो ।
त्यतिबेला पाँच सय रुपैंयाको कोठा भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले एउटा ठूलो घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । अहिले १५ सय ५० बढी गाविसमा हामी पुगेका छौं । त्यतिबेला सातजना महिला मिलेर संस्था दर्ता गर्न पनि निकै गाह«ो परेको थियो । अहिले एक लाख बढी महिला हाम्रो समूहमा आबद्ध छन् ।
२० वर्षअगाडिको जुन अप्ठेरो थियो । एकल महिला अहिले त ठाउँठाउँमा परिवारबाट बहिस्कृत छन् भने आजभन्दा २० वर्षअगाडिको अवस्था कस्तो थियो होला । त्यतिबेला सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सबै हिसाबले महिला पीडित थिए । परिवारबाट बहिस्कृत र समाजबाट तिरस्कृत विधवालाई हेर्ने दृष्टिकोण नितान्त फरक थियो ।
के एकल महिलाभित्रको आत्मा उनको श्रीमान्को मृत्युसँगै विलीन हुन्छ ?
म मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ । २९ वर्षको उमेरमा मैले श्रीमान् गुमाएँ । जब मैले उहाँलाई गुमाएँ, हिजो श्रीमान् हुँदा लगाइराखेको लुगा लगाउन नपाउने भएँ । हिँड्न बन्देज लगाइयो । तीन बच्चा थिए । ठूलो बच्चा १०, बीचको ९ र सानो जम्मा ३ वर्षका थिए । त्यतिबेला म यति धेरै जान्ने र बोल्न सक्ने थिएन । भर्खर एउटा सानो स्कुल चलाइराखेकी थिएँ । मेरो छुटेको पढाइ भर्खर पूरा हुँदै थियो । मास्टर्स गर्दै थिएँ ।
मजस्तो पढेलेखेको र आत्मनिर्भर मान्छेलाई पनि श्रीमान् गुमाएर एक्लो भएपछि यति धेरै समस्या हुन्छ भने अरू महिलाको अवस्था के होला भनेर म सोच्न बाध्य भएँ ।
त्यसपछि म त्यस्तैखालका एकल महिला खोज्दै हिँड्न थालेँ । मेरा छोराहरू गोदावरीमा रहेको स्कुलमा पढ्थे, त्यहीँ हेस्टल बस्थे । म भेट्न गइरहन्थेँ । त्यसैक्रममा एक दिन स्कुलको फादरले मलाई सम्झाउँदै एकजना विधवाबारे सुनाएका थिए । म ती महिलालाई भेट्न तीन÷चारपटकसम्म उनको घरमा धाएँ । चौथोपटकमा मात्र उनीसँग मेरो भेट भयो । मेरो बुहारीलाई बिगार्न आयौ भनेर उनकी सासूले मलाई त्यतिबेला धेरै कुरा सुनाएको हिजै हो कि जस्तो पो लाग्छ । ‘होइन आमा, मेरो श्रीमान् बितेको पनि भर्खर ४५ दिन भयो’ भनेर म आफूजस्तै महिला दिदीबहिनीका कुरा सुन्न आएकी हुँ भनेर ती आमालाई सम्झाएँ ।
ए, यति छिट्टै घरबाहिर आएकी भनेर आमाले अचम्म मानिन् । म हरियो कुर्था लगाएर गएकी थिएँ । सेतो पो लगाउनुपर्छ त । हरियो, रातो किन लगाएको भनेर ती आमा कराएको पनि हिजै हो कि जस्तो लाग्छ ।
मैले भेटेकी युवती २५ वर्षकी थिइन् । उनको काखमा बच्चा थियो । श्रीमान्को मृत्यु भइसकेपछाडि देवरले उनलाई यौनहिंसा गरिरहेका थिए । सासूको व्यवहार निकै दिक्दारलाग्दो थियो । समाजले तिरस्कार गरिरहेको थियो । माइतीले पनि नआउनू भनेका थिए । एउटा छोरालाई दूध खुवाउनका लागि मात्र ती बहिनी बाँचिरहेकी थिइन् । उनको अवस्था देखेर मलाई लाग्यो अब यस्तै महिलाका लागि केही काम गर्नुपर्छ ।
कसरी ती महिलाका लागि केही गर्ने ? कसरी तिनको उद्धार गर्ने ? भनेर म कति दिनसम्म निदाउन सकिनँ । रात दिन तिनकै निर्दोष अनुहार मेरो आँखावरिपरि डुलिरह्यो ।
केही दिनको तीव्र अन्तरद्वन्द्वपछि ती महिलालाई केही सीप सिकाएर आत्मनिर्भर गराउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगँे । एकजना साथीको सहयोगमा नमुना सिलाइ प्रशिक्षण केन्द्रमा ल्याएर सिलाइ कटाइ तालिम दिने व्यवस्था गरिदिएपछि उनको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आयो । अहिले उनी ठूलै व्यवसायी बनेकी छन् । आफ्नै सिलाइ सेन्टर खोलेर १५ जनालाई रोजगारी दिएकी छन् । आज उनलाई देख्दा मलाई गर्व लाग्छ ।
बिहेअगाडिको जीवन सबैभन्दा सुन्दर
म सम्पन्न परिवारमा जन्मेकी थिएँ र सम्पन्न परिवारमै बिहे भएको थियो । त्यसैले पनि आर्थिक रूपले मेरो आफ्नोमात्र जीवन चलाउन कुनै अप्ठेरो थिएन तर मजस्तै एकल भएका अरू गरिब महिलाका लागि केही गर्नुपर्छ र संगठित भएर कुरीति र कुसंस्कारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने सोचेर नै म तीन÷तीन बच्चालाई घरमा छाडेर उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश हान्निएकी थिएँ ।
मेरा बुवा हुमानसिंह बस्नेत नेपाली सेनाका जर्नेल थिए । काठमाडौंको कालिकास्थानमा रहेको संयुक्त परिवारमा हुर्किएकी मलाई परिवारमा कहिल्यै छोरा र छोरीको विभेद महसुुस भएन । छोरी हुँ र कमजोर छु भन्ने कहिल्यै लागेन । बुवाको पोस्टिङ जहाँ–जहाँ हुन्छ, त्यहाँ जान्थेँ सबैले निकै मायाँ गर्थे । बिहेअगाडिको जीवन सबैभन्दा सुन्दर थियो ।
पढाइमा पनि निकै तेज थिएँ । १३ वर्षको उमेरमै एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी थिएँ । खासमा १३ वर्षकी भए पनि बुवाले उमेर बढाएर १६ वर्ष बनाइदिएका थिए । किनभने त्यतिबेला एसएलसी परीक्षा दिन १६ वर्ष उमेर पुग्नैपथ्र्याे । १७ वर्षकी हुँदा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी मेरो १८ वर्षको उमेरमा त बिहे नै भइसकेकोे थियो ।
बुवाको अन्तिम इच्छा : बिहे
मेरो बिहेको पनि छुट्टै कथा छ । स्नातकको अध्ययन सकेपछि म स्नातकोत्तर पढ्न विदेश जाने योजनामा थिएँ तर त्यति नै बेला मेरो जीवनमा एउटा मोड आयो । अकस्मात् बुवा बिरामी पर्नुभयो । नौ महिनासम्म अस्पताल बस्नुपर्ने भयो । दुई अप्रेसन पनि गर्नुपर्ने भयो । अस्पलालले बाँच्ने सम्भावना छैन भनिदिएको थियो । चार सन्तानमध्ये आफ्नो पहिलो सन्तानको बिहे गरिदिने बुवाको इच्छाविरुद्ध जान सकिएन । यसरी अस्पतालको मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेका बुवाको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न विदेश पढ्न जाने सपना छाडेर मैले नेपाली सेनाका डाक्टर अमिर थापासँग बिहे गरेँ र नक्सालस्थित घरमा दाम्पत्य जीवनको सुरुवात गरेकी थिएँ ।
तर बिहेपछि अचम्मको संयोग के भयो भने अस्पतालले पनि नबाँच्ने भनेका बुवा निको हुनुभयो । त्यसबेला कर्नेल हुनुहुन्थ्यो पछि जर्नेल हुनुभयो र नाति पनि देख्नुभयोे । त्यसको केही वर्षपछाडि मात्र बुवाको निधन भयोे ।
बिहे भएको १५ वर्षसम्म म पूरै हाउसवाइफ भएर घरमै बसेँ । त्योबीचमा तीन छोरा जन्मिए । सानो छोरा जन्मिएपछि मात्र आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यतिबेलै रोजी बड्स नामको बोर्डिङ स्कुल सञ्चालनमा गरेर आफू पनि त्यसैमा व्यस्त रहन थालेकी थिएँ ।
म विधवा भएँ
जीवन आफ्नै गतिमा चलिरहेको थियो । श्रीमान् शान्तिसेना मिसनमा इराक जानुभएको थियो तर उहाँ इराकबाट कहिल्यै फर्केर आउन सक्नुभएन । उहाँको उतै निधन भयो । मेरा बच्चा निकै साना थिए । र, यसरी मेरो जीवनले एउटा अर्को मोड लियो ।
जीवनमा आकस्मिक आइपर्ने परिघटनाले धेरै कुरा सोच्न बाध्य बनाउँदारहेछन् । यसरी निरश र रंगहीन जीवन बाँचिरहेका एकल महिलाका लागि संस्था गठन गर्ने कुरा उठेपछि मलाई लाग्यो— यो विषयमा मैले अझै धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ । समयले एकल महिलाको क्षेत्रमै काम गर्ने कुनै संस्था माग गरिसकेको थियो तर मसँग यसबारे पर्याप्त मात्रामा न त ज्ञान थियो न त अनुभव नै । त्यसैले यसबारे थप अध्ययन गर्न केही समय मिलाएर म विदेश लागेकी थिएँ ।
आइतवारको दिन भेट हुने तालिका निर्धारण गरिएको थियो । कति महिला घरमा अनेक बहाना बनाएर आउँथे, अफिसमा रुन र भावना साट्न । पहिले–पहिले आठ/दसजना मात्र आउने ठाउँमा पछि–पछि पचासौंजना एकल महिला जम्मा हुन थाल्यौं । पछि स्कुलमा पनि डिस्टर्ब हुन थाल्यो । अनि घट्टेकुलो स्कुलनजिकै सानो कोठा पाँच सय रुपैयाँमा भाडामा लिएर औपचारिक हिसाबले संस्थाको अफिस सञ्चालन गरियो ।
यसरी जन्मियो संस्था
संस्था भनेको के हो ? एनजीओ भनेको के हो ? मलाई केही थाहा थिएन । आइतवारको दिन आफ्नो स्कुलको कार्यकक्षमा पति गुमाएका एकल महिला भेला हुने, रुने, आफ्नो मनको कुरा सुन्ने सुनाउने गथ्र्याैं । मेरो सबैभन्दा पहिलो डोनर मेरी आफ्नी आमा हुनुहुन्छ । कोही महिलाका लागि केही सहयोग जुटाउन पर्यो भने आमासँग पैसा माग्थँे । कसैका बच्चा भर्ना गर्नुपरेमा वा कसैलाई उपचार गर्नुपरेमा या कसैका बच्चाको फिस तिर्नुपरेमा जे गर्नका लागि पैसा मागेको बेलामा आमाले कहिल्यै नाइनास्ती गर्नुभएन किनभने छोरीले धेरैको भलो हुने काम गरिरहेकी छे भन्ने कुरा आमालाई थाहा थियो ।
यसरी मैले सामाजिक काममा हात अगाडि बढाउन सुरु गरेँ । आफ्नो स्कुलमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने एकल महिलाका बच्चाका लागि निश्चित कोटामा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि–पछि त कस्तोसम्म भयो भने गाउँतिरका दिवंगत सैनिकका श्रीमती बच्चालाई छात्रवृत्तिमा पढाउन पाइन्छ रे भन्ने सुनेर हाम्रो स्कुल नजिकै डेरा लिएर बस्न थाले र त्यस्ता बच्चाको क्रेजलाई थाम्न स्कुललाई हम्मेहम्मे पर्न थाल्यो ।
संस्था दर्ता गर्न सुरुमा उत्तिकै गाह«ो परेको थियो । कुनै पनि एनजीओ दर्ता गर्न सातजनाको नागरिकता चाहिने सरकारी नियमबमोजिम उनी नागरिकता बटुल्न लागिन् तर विधवाले नागरिकता दिन डराए । के पो हुने हो । भोलि परिवारले केही पो भन्ने हुन् कि, सम्पत्ति पाउनबाट परिवारले वञ्चित गर्ने पो हो कि भनेर उनीहरू भयभीत थिए । अफिस पनि नाममात्रको थियो । महिलाहरू आउँथे, आउनबित्तिकै पर्दा तानेर रुन थाल्थे । पछि जसले आफूलाई विश्वास गर्छ त्यस्ता आफ्ना आफन्त दिदिबहीनीको नागरिकता मागेर उनले संस्था दर्ता गरिन् ।
मान्छेको सोचमा परिवर्तन
अहिले हेर्दा लाग्छ– यो एउटा अभियान हो । अहिले ७५ जिल्लामा महिला संगठित छन् । एकल महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण नै फरक छ । हिजो आफैँ खर्च हालेर संस्था चलाउने गरिन्थ्यो आज सरकारले आफँै खोजेर बजेट दिने गर्छ । पहिले विधवाले लाउने, खाने सबै कुरामा आचारसंहिता थिए । अहिले कमसेकम जो एकल महिला हाम्रो सम्पर्कमा छन्, उनीहरू त्यो आचारसंहिता तोडेर हिँड्न सक्षम छन् । यद्यपि, समाजमा अझै पनि असंगठित धेरै एकल महिला आचारसंहिताभित्रै कैद छन् । त्यसलाई तोडर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक कुसंस्कारमा रुमलिरहेका छन् । पहिले परैबाट यो विधवा र सधवा भनेर चिनिन्थ्यो भने आज त्यो अवस्था छैन । मान्छेको सोच परिवर्तन भएको छ । हिजो सरकारसँग यस विषयमा कुनै योजना थिएन भने आज आफ्नो योजनामा समेटिसकेको छ । सरकारले अहिले एकल महिलाका लागि अक्षयकोष नै खडा गरेको छ ।
धर्मले कतै पनि विधवालाई कमजोर भनेर व्याख्या गरेको छैन । हिन्दु धर्म, कुरान, बाइबल अथवा त्रिपिटक कतै पनि महिलालाई कमजोर भनेर लेखिएको छैन तर समाजमा आफूलाई अगुवा भन्नेले धर्मग्रन्थको अपव्याख्या गरेका छन् । र, धर्मलाई पनि आफूअनुरूप प्रयोग गरेका छन् । धर्मले त बरु महिलालाई शक्तिकी देवीका रूपमा, एउटा शक्तिशाली पात्रका रूपमा उभ्याइदिएको छ । तर, आफूलाई समाजका नाइके भन्नेले धर्मको आफूअनुकूल हुनेगरी व्याख्या गरिरहेका छन् ।
एकल महिलाले पाउने विधवा भत्ता पहिले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था थियो । हामीले यसबारे सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हालेर मुद्दा जितेका छौँ । कुनै महिलाले विधवाभत्ता पाउन अब उमेरको हदबन्दी छैन ।
यसैगरी, ३५ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र सम्पत्ति पाउने कानुनी प्रावधान अहिले हटिसकेको छ । म आफैँ २९ वर्षको उमेरमा विधवा भएको हो । ३५ वर्षसम्म किन कुर्ने भनेर मुद्दा हालियो र त्यो पनि जितियो । विधवासँग विवाह गर्ने युवालाई सरकारले ५० हजार दिने प्रावधान थियो अहिले त्यो हटाइएको छ । अहिले पुनर्विवाह गरे पनि पहिलेको श्रीमान्को अंश पाउने नजिर स्थापित गरिएको छ । नेपाल सरकारले पुनर्विवाह गर्दा दिने त्यही रकम अहिले विधवाका लागि सुरक्षाकोष बनाएको छ । त्यही रकमले गाउँ–गाउँमा एकल महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धिदेखि अन्य विभिन्न प्राविधिक तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । आयमूलक काम, सीपमूलक तालिम र कानुनी जटिलता मिलाउन पनि एकल महिलाले त्यो कोषबाट रकम पाउन सक्ने भएका छन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जानुपर््यो भने राहदानी बनाउँदा श्रीमान् नभएका महिलाले घरका अरू कुनै पुरुष सदस्यको स्वीकृति लिनुपर्ने चलन थियो । त्यो प्रावधान पनि हटाइएको छ । त्यस्तै एकल महिलाको हकमा १८ वर्ष पुगेको छोरा र अविवाहित छोरीको स्वीकृतिविना आमाले एक्लै आफ्नो अंश केही गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानलाई फेरिएको छ ।
दक्षिण एसियाका सबै देशमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ । कम बेसीको मात्र कुरा हो । कतै कम होला कतै बढी होला । तर, समग्रमा महिला र अझै एकल महिलाको अवस्था दयनीय नै छ । दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने भारतमा सबैभन्दा बढी महिला विधवा छन् । त्यसपछि नेपाल ।
मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ– विधवाको क्षेत्रमा यति काम गर्नुपर्ने रहेछ र त मेरो जीवनमा यस्तो घटना घटेको रहेछ । २९ वर्षको कलिलो उमेरमै मैले मेरो प्रिय मान्छे यसैका लागि गुमाएकी रहेछु जस्तो पनि लाग्छ । यदि मैले मेरो जीवनसाथी नगुमाएको भए आउन त कोही यो क्षेत्रमा आँउदो हो, कसै न कसैले त गर्दो हो तर म नै आउने थिइनँ होला तर मेरै भागमा यो सबै गर्नुरहेछ । फर्केर हेर्दा केही त गर्न सकेँजस्तो लाग्छ । अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ ।
छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुस्
सबैभन्दा ठूलो कुरा आजका छोरीलाई भोलिका लागि तयार बनाउनु छ । आत्मसम्मानसाथ बाँच्न सक्ने बहादुर छोरीका लागि अझै हामीले केही गर्नु छ । आजका सबै आमाले छोरीलाई त्यही मानसिकतासाथ हुर्काउनु जरुरी छ । श्रीमान्ले पनि मेरो श्रीमती मविना पनि आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न सकोस् भनेर आजैदेखि श्रीमतीलाई मानसिक रूपमा तयार पार्न आवश्यक छ । कुनै पनि बेला एक्लै हुन सकिन्छ र एक्लै पनि जीवन चलाउनुपर्छ भनेर आजैबाट सबै छोरीले सोच्न थालून् भन्ने मेरो सल्लाह छ । कलेजका कोर्समा पनि विधवा विषयमा पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन सकिन्छ ।
विधवा हुनु भनेको कमजोर हुनु होइन वा एउटी महिलाका लागि उसको जीवनको अन्त्य हुनु होइन । कुनै पनि बेला कोही पनि स्वास्नीमान्छे विधवा हुन सक्छे, उसको सहयात्री कतै बीचबाटोमा अलप हुन सक्छ । त्यसैले सबै स्वास्नीमान्छे आउन सक्ने सम्भावित अप्ठेरा चुनौती डटेर मुकाविला गर्न सक्नेगरी तयार होऊन भन्ने मेरो सल्लाह छ ।
समाज रातारात परिवर्तन हुन सक्दैन । ८० प्रतिशत एकल महिला अझै निरक्षर छन् । उनीहरू बाँच्ने कसरी भन्ने ठूलो चुनौती छ । त्यसमाथि भर्खरै मुलुक द्वन्द्वबाट बाहिर आएको छ । त्यहाँ कतिधेरै जवान युवतीहरू एकल भएका छन् । भूकम्पले झन्डै ५० हजार जति महिलालाई विधवा बनाइदिएको छ । तिनीहरूको विकराल जीवन हाम्रा अगाडि छ । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने कसरी बनाउने यो चुनौती हाम्रोसामु छ । तिनका सवाललाई नीति निर्माण तहमा कसरी पुर्याउने र तिनीहरूको पनि भौतिक उपस्थितिको सुनिश्चितता कसरी माथिल्लो तहमा पुर्याउने भन्ने चुनौती पनि हाम्रोसामु छ ।
हामीले केही त गरेका छौं तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । अरूमा आश्रित हुनबाट कसरी बच्ने ? भनेर आजैबाट सोच्न विशेषतः विवाहित महिलालाई मेरो अनुरोध छ । आमाबुवालाई पनि मेरो आग्रह छ । आफ्ना छोराछोरीलाई आत्मनिर्भर हुने र विश्लेषण गर्न सक्ने कसरी बनाउने भनेर आजैबाट सोच्नुस् ।